DAAWO:- DFS oo qiratay in looga guuleystay Kiiskii Badda kadib markii ICJ ay la ogolaatay codsigii Kenya. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO:- DFS oo qiratay in looga guuleystay Kiiskii Badda kadib markii ICJ ay la ogolaatay codsigii Kenya.
Maxkamada ICJ waxay galabta go’aamisey in dhageysiga dacwada badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya dib loo dhigay.
Warka ka soo baxay ICJ ayaa lagu shaaciyay in dib loo dhigo kiiska ilaa June 8- 12, 2020. Iyadoo Maxkamadda go’aankeeda ku cadeeysey inay fileyso in labada waddan u yimaadaan dhigeysiga maxkmada,Go’aankaana u yahay mid kama dambeys ah ee mar dambe dib loo dhigi doonin.
Danjire Ali Faqi ayaa bartiisa xiriirka bulshada ku xaqiijiyay warkaan.
Raiisal wasaare xigeenka Somalia ayaa kahadlay arintaan isagoona shacabka socmaliyeed faahfaahin ka siiyay go;aanka cusub ee kasoo baxay maxkamadda ICJ.
Kenya ayaa marar badan sameysay isku dayo ay ku baajineyso Maxkamadda iyadoo dooneysa in si hoose ay labada wadan u xaliyaan kiiska.
Previous articleDAAWO:- DFS oo soo saartay awaamir kusaabsan waxbarashada oo aad udag “Awaamir aan abid la arag”.
Next articleDAAWO VIDEO:Xog Jabhad Hubaysan ee Borama oo calanka soomaliya qatay,Turkiga xayirada
Abdulqadir Tallman October 18, 2019 At 2:56 pm
Lacagtii la siin lahaa qareennadii hore oo ka khirad iyo aqoon badnaa kuwan biidhabiidhada ah, Farmaajo wuxuu u isticmaalay laaluush iyo duminta maamul goboleedyada kala ah Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Jubbaland. Waxaa lacagahaas loo isticmaalay eryiddii Jawaari.
Maanta waxaa la la’yahay wax mushahar looga dhigo qareennadii tayada lahaa ee horeyba uugu adkaaday doodihii hordhaca ahaa oo kaga ilmeysiiyay dhinacii kale ee Uhuru.
Maanta qareenno barbarad ah baa kiiskii loo dhiibay. Maanta raiisulwasare-ku-xigeen awalba Itoobiya ay soo dirsatay iyo kan laataacaleyshka ah uu Farmaajo ku aaminay jagada muhiimka ah ee safiirnimada EU-da (Midowga Yurub oo dhan) baa intay xoogaagooda ka qaataan Kenya, Farmaajana barkiisa u geeyaan) baddii faraha ka sii bixinaaya.
Farmaajo wuxuu doonayaa inuu Kenya badda u gacan geliyo si” ay iyadana uga kaalmeyso doorasha madaxweynaha ee 2021-da.
Farmaajo wuxuu is-barbar dhigay: afar sanoo kale uu ku guuleysto madaxwenenimada iyo in baddii Soomaaliyeed
Kenya loo xukumo. Wuxuuna doortay inuu baddii Soomaaliyeed faraha ka bixiyo.
Doqonku wuxuusan garan inuu Sooomaaliya oo dhan cag soo dhigi kari doonin hadda baddaas uu u loogo Kenya.Soomaaliyana cidlo ma joogtee Allaa u maqan. Yaan la niyad jabin.Maskan faraqa noo galay oo Farmaaja ahna, Allaha u bixiyo rag waddanka jecel oo sharkiisa iyo shiqoolladiisa isaga ku giddiya.
Shakiga ugu weyn waxaa igu abuuray in codsigii hore ee Kenya oo ahaa in dacwada dib loo dhigo ilaa hal sano. Taa lagama yeelin oo laba bilood baa dib loo dhigay.
Caadiyan, sida lagu yaqaan maxkamadaha, codsiga kale ee dambe waxay aheyd in Kenya la siiyo muddo ka yar too labada bilood aheyd. Matalan in dib loogu dhigo bil kale. Hadda siddeed bilood baa dib loogu dhigay Kenya. Waaya-aragnimadeyda gar-aqoonnimada inaas bay ii tilmaameysaa.
Amuurtan dibu-dhigidda siddeeda bilood ah maaha wax caadi ah. Xagga Soomaaliya kuwii matalaayay ee Mahdi iyo Fiqi baa laga helay carrab laalaadin iyo oggolaansho hoose.
Taas ayaa igu dhalisay shakiga ah in Mahdi Khadar ra’isul wasaare ku xigeenka ay Itoobiya soo dirsatay iyo Safiirka macne-yareha ah ee inoo fadhiya Midowga Yurub Cali Saciid Fiqi ay xoogaagooda kenya ka qaateen, Farmaajana qeybtiisa u dusiyeen.
Farmaajo badda waxaa uga daran inuu afar sanoo kale ku adkaado madaxweynenimada dalka. Kenyana taas bay ka ballan qaaday, qiyaasteyda.
Bal raac linkigann hoose oo xambaarsan wax u dhow, shaabbahane, faalladeydan kore: